रोजगार Archives – Satabdi News
३० भाद्र, इटहरी । किरात राई बान्तावा खिमले प्रदेश एकको सरकारी कामकाजी भाषामा बान्तावा भाषालाई नसमेटेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । खिमले हिजो (मंगलबार) सुनसरीको इटहरीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि भाषा आयोगले १ नम्बर प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषामा बान्तावालाई नसमेटर अन्याय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै
१२ साउन २०७८, मंगलबार । इजरायलमा रोजगारीका लागि आवेदन खुलेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले केयरगिभरका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन मागेको हो। विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै २१ दिनभित्र आवेदन दिन भनेको छ। विभागले इजरायलको हेरचाह केन्द्रमा सहायक कामदारका लागि आवेदन पेस गर्नेसम्बन्धी आवश्यक नियम तथा सर्तहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। इच्छुक
८ असार, काठमाडौ । विगत वर्षहरुमा झैँ यस वर्ष पनि राष्ट्रिय युवा परिषद्को वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख भएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नमूना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रम हालको महामारीलाई ध्यानमा राखी देहाय वमोजिम जुमको माध्यमबाट हुने भएकोले प्रदेश र संघीय तहमा सहभागी हुन ईच्छुक युवालाई मिति २०७८ आषाढ १७ गते ५ बजे
बेलवारीमा मोबाइल फोन मर्मत तालिम सुरु
बेलवारी, २२ चैत । बेलवारी नगरपालकिलाई लक्ष्तिगर्देँ गण्डकि मल्टिपल इन्ष्टिच्युट प्रा .लि को आयोजनामा आज (आइतवार) मोबाइल फोन मर्मत तालिक सुरु भएको छ । बेलवारी नगरपालिका वडा न १ नेपाल तमु बुदिष्ट्र गुम्वाको भवनमा मोबाइल फोन मर्मत तालिम सञ्चालन गरेको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बेलवारी नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य बिन्दुकला
बेलबारी नगरपालिकाले माग्यो २३ कर्मचारी
२६ पुस, बेलबारी । बेलबारी नगरपालिकाले भुमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधानको लागि विभिन्न पदहरुमा पदपुर्तिको लागि आवश्यक कर्मचारीको माग गरेको छ । शुक्रबार नगरपालिकाले एक सुचना प्रकाशित गर्दै कर्मचारीको माग गरेको हो । नगरपालिकाले विभिन्न पदका लागि दरखास्त आवान गरेको छ । त्यसै क्रममा ईन्जिनियर अधिकृत छैठोँ १,
बुधबारबाट ईडिभिको फारम खुल्यो
असोज २१, काठमाडौं । २०२२ का लागि अमेरिकी सरकारको डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) बुधबार रातिबाट खुल्ने भएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाली सयम अनुसार बुधबार राती ९ बजेर ४५ मिनेटपछि आवेदन खुला गरिने जनाएको छ । अमेरिकाले हरेक वर्ष डीभी भरेकाहरुलाई चिठ्ठामार्फत अमेरिका लैजाने गरेको छ । डीभी परेर अमेरिका
नेपाली समय अनुसार ईडिभी आज ९:४५ मा सार्वजनिक हुदै
जेठ २४, काठमाडौं । अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा ९डीभी० २०२१ को नतिजा आज ९शनिबार० सार्वजनिक हुने भएको छ । । मे ५ मा हुने भनिएको छनोट कोेभिड–१९ को कारण ६ जुनमा सारिएको अमेरिकी दूतावासका जनाएको छ । आज नेपाली समय अनुसार राति ९ः४५ बजे डीभीको नतिजा प्रकाशीत हुने छ भने अन्तर्वार्ता
लकडाउनको समयमा “दूध ढुवानी सेवा“ टाँसेर अवैध मदिरा ओसारपोसार
२५ चैैत, मकवानपुर : ‘दूध ढुवानी सेवा’ टाँसेर अवैध मदिरा लैजाँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले टेम्पोलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। लकडाउनको बेला मंगलबार बिहान ६ बजेतिर मकवानपुर-२ चौकीटोल सडकमा ना १ ह ५३८१ नं. को टेम्पोले ‘दूध ढुवानी सेवा’ भनि टाँसेर सामरी तर्फबाट हेटौंडा आउँदै गरेको थियो। उक्त टेम्पो चेक गर्दा अवैध
नेपाल राष्ट्र बैंकको १७ औ गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी
२४ चैत, बेलबारी । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । अधिकारीलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले नयाँ गभर्नरका लागि अधिकारीलाई सिफारिस गरेको हो । यो संगै डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र डा. राजन खनालको नाम सिफारिस गरेको थियो
धरान । चिया स्टेसन हो । क्याफे होईन । तर पनि अन्य चिया पसल जस्तो काठको बेर्नची छैनन् । काठको टेबल र काठको समान्य टुल छन । कुर्सी छैनन् । मुडा छन् । चिया खाने बजारिया चल्तीका ग्लास छैनन् । माटोका कप (मट्का) छन् । धरान – १९ धनकुटे रोड